Tradenep असार मसान्तसम्म ४३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै | Tradenep
असार मसान्तसम्म ४३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम महीना (असार) मा रू. ४३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । असारका अन्तिम ५ दिनमा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र मार्फत यस्तो ऋण उठाउन लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले एक साताअघि उक्त रकम बराबरको ऋणपत्र विक्री गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक सुमन अधिकारीले बताए । असार ३० मा ट्रेजरी बिलमार्फत रू. २० अर्ब उठाउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक छ । राष्ट्र बैंकले उक्त रकम बराबरको ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिल एकै दिन जारी गर्न लागेको छ । उक्त ऋणपत्र असार ३१ मा निष्कासन गरिनेछ । पाँचवर्षे (२०८१ ग) को रू. १२ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र भने असार २६ मा जारी गरिसकेको छ ।
चालू आव २०७५/७६ मा रू. १७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य थियो । चौथो त्रैमासमा आएर त्यसको आधा अर्थात् रू. ८६ अर्ब आन्तरिक ऋण जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा पनि रू. ५३ अर्बको ऋणपत्र मात्र विक्री भएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्षको १० महीनासम्ममा आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले पहलकदमी लिएन । चौथो त्रैमासमा आएर भने आक्रामक शैलीमा ऋणपत्र विक्रीको रणनीति लिएको हो । त्यसमा पनि ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र विक्रीलाई मात्र जोड दिएको छ । नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र र राष्ट्रिय बचतपत्रजस्ता आन्तरिक ऋणका औजार प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
आज रू. ११ अर्बको विकास ऋणपत्र राष्ट्र बैंकले आइतवार रू. ११ अर्बको विकास ऋणपत्र बोलकोबलमा विक्रीमा ल्याउँदै छ । उक्त ऋणपत्र आठवर्षे अवधिको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र नेपाली नागरिकले उक्त ऋणपत्र खरीद गर्न सक्नेछन् । इच्छुक संस्था र व्यक्तिले आइतवार अपराह्न ३ बजेसम्म राष्ट्र बैंकको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमार्फत बोलकबोल पेश गर्न सक्नेछन्, जसलाई सोमवार निष्कासन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ऋणपत्रको अवधि सकिएपछि २०८४ असार ३० मा एकमुष्ट रूपमा साँवा भुक्तानी गरिनेछ । ब्याज भने अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ । आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलकबोलवालाहरूलाई निष्कासित रकमको क्रमशः ८० र २० प्रतिशत अर्थात रू. ८ अर्ब ८० करोड र रू. २ अर्ब ४० करोड छुट्याइएको छ । खरीदकर्ताले घटीमा रू. ५० हजारसम्मको ऋणपत्र खरीद गर्न सक्नेछन् ।
सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि २३…
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयारी सौर्य उर्जाबाट…
माथिल्लो तामाकोशी: तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप…
हुवावे अलग हुँदा गुगलका ८० करोड…
विकास खर्च : ३५३ दिनमा १७१…
कुलेखानी तेस्रोको विद्युत् उत्पादन सुरु
मेडिकल कलेजको निर्माण तीब्र गतिमा
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, २ सय ३…
१४ वटा पुगे पाँचतारे होटल, काठमाडौं…
साझाका २० नयाँ बस आजदेखि सेवामा,…